Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Labyrinth' dia miverina amin'ny teatra amin'ny faha-35 taonany!
by Waylon Jordan Aogositra 5, 2021
by Waylon Jordan Aogositra 5, 2021 36,250 hevitra
Sarimihetsika nofinofy momba an'i Jim Henson Labyrinth hiverina amin'ny teatra amin'ity fianjerana ity amin'ny fankalazana ny faha-35 taonany noho ny Fathom Events.
Starring Jennifer Connelly and David Bowie, the film says the story of a maditra tovovavy tovovavy atao hoe Sarah izay tsy nahy firy ny rahalahiny zazalahy ho eo an-tanan'i Jareth, ny Goblin King izay ny tranony dia eo afovoan'ny miolakolaka, mivadika labirinty. Rehefa mikasa hamonjy ilay zaza izy dia mianatra lesona momba ny finamanana, ny fahatokisana ary ny heriny manokana sy ny tanjany manokana eny an-dalana.
Ilay angano maizina dia mora iray amin'ireo sarimihetsika mahavariana indrindra amin'ny karazany nanomboka ny taona 1980, angamba i Henson's ihany no nifaninana taminy Ny Crystal Kristiana.
Connelly sy Bowie toa an'i Sarah sy Jareth, ilay Goblin King.
"Iray amin'ireo lohateny nangatahinay matetika, Labyrinth mankafy sehatra mpankafy lehibe sy feno fanoloran-tena, "hoy i Tom Lucas, Fathom Events Filoha lefitry ny Studio Relations. "Faly izahay mitondra an'ity mpankafy ankafizin'ny The Jim Henson Company ity any amin'ny sinema manerana ny firenena, ary indrindra mandritra ny faha-35 taonany."
Labyrinth notarihin'i Jim Henson niaraka tamin'ny script nataon'i Terry Jones of Monty Python laza. Brian Froud dia mpanamboatra endrika amin'ny tetikasa miaraka amin'i George Lucas izay mpamokatra mpanatanteraka. I Trevor Jones no namorona ny isa ary i Bowie no nanolotra hira an'ilay horonantsary, anisan'izany ny "Magic Dance."
Tapakilan'ny Labyrinth dia hamidy rahampitso zoma 6 aogositra 2021, ny tranokala ofisialy Fathom Events. Hijery ny sarimihetsika 12, 13, ary 15, 2021 septambra.